February 2022 - Shwe Sagar
အခြေအနေမကောင်းတဲ့ အနုပညာလောကကြောင့် စီးပွားရေးဘက်ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ကျောက်မျက်သင်တန်းဆင်းပွဲဗီဒီယိုဖိုင်…
aung myo hlaing | 28/02/2022
အခြေအနေမကောင်းတဲ့ အနုပညာလောကကြောင့် စီးပွားရေးဘက်ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ကျောက်မျက်သင်တန်းဆင်းပွဲဗီဒီယိုဖိုင်… နေခြည်ဦးဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုကိုအများဆုံးရထားတဲ့ Celeတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မိန်းကလေးပရိသတ်အများဆုံးအားပေးမှုကိုရရှိထားပြီး ကောင်လေးအများစုရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရရှိထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမဟာဝေဖန်မှုတွေများစွာခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း လူမှုကွန်ရက်ကနေအချိန်တော်ကြာပျောက်သွားခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ပုံရိပ်လေးတွေတင်လေ့ရှိတာပါ။ ခုမှာတော့ သူမဟာ ဒူဘိုင်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ကျောက်မျက်ရတနာသင်တန်းတက်နေတာပါ။ အမြဲပညာတစ်ခုခုကို ကြိုးစားတက်ရောက်တဲ့သူမဟာ ခုမှာ လည်းသင်တန်းကိုအောင်မြင်စွာတက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့တာပါ။
ပရိသတ်တွေ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ သူမငယ်စဉ်က ချစ်စရာ ပုံလေးတွေကို ဝေမျှလာတဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
ပရိသတ်တွေ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ သူမငယ်စဉ်က ချစ်စရာ ပုံလေးတွေကို ဝေမျှလာတဲ့ နော်ဖောအယ်ထား အေးချမ်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေရယ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲအချစ်ပိုစေသူလေး နော်ဖောအယ်ထားကိုတော့ အထူးတလည်မိတ်ဆက်စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်နော်။ဖြူဝင်းဥတဲ့ အသားအရေလေးရယ် သွယ်လျကျစ်လစ်ပြီး အဆီပိုမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေးတိုင်း အားကျနှစ်သက် ချစ်ခင်နေရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့ အနုပညာလောကကို ဝင်ရောက်လာပြီး ယခုချိန်မှာတော့ ကြော်ငြာများ ဇာတ်ကားများရိုက်သည်အထိ ပရိသတ်တွေရဲ့
သူမရဲ့ရည်စားကို “အစ်ကို့ဘက်ကနာလို့ပါ” ဆိုပြီးအစချီကာ သူမရဲ့ အကြောင်း မကောင်းတာတွေလာပြောတဲ့တယောက်ကို ဒဲ့ ဖဲ့လိုက်တဲ့ မြတ်သူသူ…
သူမရဲ့ရည်စားကို “အစ်ကို့ဘက်ကနာလို့ပါ” ဆိုပြီးအစချီကာ သူမရဲ့ အကြောင်း မကောင်းတာတွေလာပြောတဲ့တယောက်ကို ဒဲ့ ဖဲ့လိုက်တဲ့ မြတ်သူသူ… နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ မြတ်သူသူကတော့ သူမရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ မလျော့သောဇွဲလုံ့လတို့ကြောင့် တစ်နေ့တစ်ခြားအောင်မြင်လာခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ဆောင်မှုမရှိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့ မြတ်သူသူက မဟုတ်မမှန်တာတွေ့ရင် ဖွင့်ပြောတတ်သူဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း သူမရဲ့ချစ်သူကို မနာလိုမုန်းတီးသူတွေက ဂုန်းချောစကားတွေပြောကြကြောင်း ပြသလာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ
ကံပါသလောက်သာ ခွဲစိတ်လို့ရဦးမယ့် သားလေး အာကြီးရဲ့ မျက်နှာအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ….
ကံပါသလောက်သာ ခွဲစိတ်လို့ရဦးမယ့် သားလေး အာကြီးရဲ့ မျက်နှာအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ…. သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ လူတကာ မလုပ်နိုင်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသူ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကောင်းသတင်းမွှေးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းနဲ့ ခိုင်မိသားစုဂေဟာတို့ကို ဦးစီးပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေသူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒီကနေ့မှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေက ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ သားငယ်မောင်အာကြီးရဲ့
တွေ့မြင်သူတိုင်း အားကျသွားစေမယ့် ဓာတ်လှေကားထဲမှာ အပြတ်ကဲနေတဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်တွေကို ချပြလာတဲ့ ကောင်းပြည့်နဲ့ သန္တာဗိုလ်…
aung myo hlaing | 27/02/2022
တွေ့မြင်သူတိုင်း အားကျသွားစေမယ့် ဓာတ်လှေကားထဲမှာ အပြတ်ကဲနေတဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်တွေကို ချပြလာတဲ့ ကောင်းပြည့်နဲ့ သန္တာဗိုလ်… မင်းသမီးချောလေး သန္တာဗိုလ်ကတော့ ဖြူဖွေးဝင်းဥတဲ့ အသားအရေလေးနဲ့အတူ သွယ်လျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိန်းကလေးအချင်းချင်း ငေးကြည့်ရလောက်အောင်ကို လှနိုင်လွန်းတဲ့ သန္တာဗိုလ်က ခေါင်းအစခြေအဆုံးအထိ အပြစ်ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ကို ပြည့်စုံလွန်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သန္တာဗိုလ်က သူမနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဖက်ရှင်လေးတွေကို ရွေးချယ်
ဂီတမောင်နှမတွေနဲ့ ပွဲတခုမှာပြန်ဆုံတွေ့ခိုက် အားလုံးကသူ့အပေါ်နွေးထွေးကြတာမို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ အစ္စဏီ…
ဂီတမောင်နှမတွေနဲ့ ပွဲတခုမှာပြန်ဆုံတွေ့ခိုက် အားလုံးကသူ့အပေါ်နွေးထွေးကြတာမို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ အစ္စဏီ… သီချင်းအေးအေးလေးတွေကို အသံချိုချိုလေးနဲ့ သီဆိုတဲ့ အစ္စဏီက အဆိုတော်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သူရဲ့သီချင်းတွေက အခုချိန်ထိ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ကျော်ကြားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီး မကြာသေးမီကမှ လွတ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ဘဝအသစ်ကို ပြန်စရင်း အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ မိခင်နဲ့အတူ အလုပ်တွေဝိုင်းကူ
ဝေဠုကျော်ကို စွဲဆိုထားတဲ့ “ကာမလိမ်လည်ရယူမှု” ကမပြီးပြတ်သေးတာမို့ ရုတ်သိမ်းသွားဖို့ မရှိဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလာတဲ့ သင်းသင်း…
ဝေဠုကျော်ကို စွဲဆိုထားတဲ့ “ကာမလိမ်လည်ရယူမှု” ကမပြီးပြတ်သေးတာမို့ ရုတ်သိမ်းသွားဖို့ မရှိဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလာတဲ့ သင်းသင်း… သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်အား ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည့် အလှမယ် သင်းသင်းက အဆိုပါ အမှုအား ရုတ်သိမ်းထားခြင်း မရှိဘဲ အဆုံးထိ ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။အလှမယ် သင်းသင်းက “အမှုကိစ္စက မပြီးသေးဘူး။ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရဆဲပဲ။ အမှုကို
ညီအစ်မတွေလို့ထင်ရလောက်အောင် နုပျိုတဲ့ မေမေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်း…
ညီအစ်မတွေလို့ထင်ရလောက်အောင် နုပျိုတဲ့ မေမေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်း… ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းကတော့ငယ်စဥ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေလည်းရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာသရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းကသူမရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတစ်ချို့ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့မြင်ကွင်းကနေခနတာပျောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးက ညီအစ်မတွေလားထင်ရလောက်တဲ့ ယွန်းယွန်းမေမေရဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Crd zawgyi ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက အႏုပညာေလာကထဲဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုေတြလည္းရရွိထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ လက္ရွိမွာသ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းက သူမရဲ႕လူမႈေရးကိစၥတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ျမင္ကြင္းကေနခနတာေပ်ာက္ေနခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းရဲ႕အမာခံပရိသတ္တစ္ဦးက ညီအစ္မေတြလားထင္ရေလာက္တဲ့ ယြန္းယြန္းေမေမရဲ႕ပုံေလးေတြကိုမွ်ေဝထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အနက်ရောင် ဖက်ရှင်လေးဝတ်ဆင်ကာ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ကြည်လင်ရှင်းသန့်စွာလှပနေတဲ့ စံထိပ်ထားဦး…
aung myo hlaing | 26/02/2022
အနက်ရောင် ဖက်ရှင်လေးဝတ်ဆင်ကာ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ကြည်လင်ရှင်းသန့်စွာလှပနေတဲ့ စံထိပ်ထားဦး… ဆွဲဆော င်မှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြ င်ကလေးလေးလို ဖြူစင်တဲ့အြ ပုံးလှလှလေးတွေနဲ့ချစ်စ ရာကောင်း တာေ လးတွေကြောင့်လည်း ပုရိသပရိသ တ်တွေရဲ့ အသည်းလေးေတွကြွေဆင်းနေရတာ ပါ ။စံထိပ်ထားဦးက အခုဆိုရင် အနုပညာလှုပ် ရှားမှုတွေကို လုပ်ကိုင်ေ နပြီဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်း ရရှိနေပြီဖြစ်ပါ တယ်နော်။
အလှမယ် သင်းသင်းကို ပြန်လွတ်လာရင်လည်း လိမ်လိမ်မာမာနေဖို့ တရားပြဆုံးမနေတဲ့ ဆရာမကြီး ရွှေရူပါဦး….
အလှမယ် သင်းသင်းကို ပြန်လွတ်လာရင်လည်း လိမ်လိမ်မာမာနေဖို့ တရားပြဆုံးမနေတဲ့ ဆရာမကြီး ရွှေရူပါဦး…. ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ မော်ဒယ်ရွှေရူပါဦးက တော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ မော်ဒယ်လ် တယောက်လို့ သူမကိုယ်သူမပြောနေပေမယ့် ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သူမကို တပ်ချစ်သူလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်နော်. တချို့ဆို အခုမှ မြင်ဖူးတယ်ဆိုပြီးတောင် ပြောနေကြတာပါ. အခုထိလည်း ဇာတ်ကားတကားမှ မရိုက်ကူးရဖူးသေးပေမယ့် သူမကိုယ်သူမ မင်းသမီးပါလို့ အမြဲ